Hatramin'ny andro fahiny, ireo daty dia heverina ho sakafo masina ho an'ireo firenena silamo. Any izy ireo dia heverina ho "mofo any an'efitra". Ary eto amin'ny firenentsika dia tena mahafinaritra ity vokatra ity. Voalohany indrindra, mahafinaritra tokoa izany. Na izany aza, ankoatra ny tsiro mahafinaritra, ny daty dia manana vitaminina, singa maromaro, ary karazana ilaina mahasoa.
Fananana fanasitranana daty
Noho ny votoatin'ny fibre lehibe dia manatsara ny famoahana ny daty. Misy mineraly sy saline maro (15 eo ho eo), asidra isan-karazany (mihoatra ny 20), vitamina A, B ary C, ary koa ny tsiranoka. Ny daty dia mamerina tanteraka ny tanjaka ary manitsy ny fandanjana ny microelements ao amin'ny vatana. Tena mahasalama izy ireo - 300 kcal amin'ny 100 grama.
Ny fanasitranana ny daty ho an'ny hoditra, ny volony ary ny fantsika dia tena sarobidy. Ity vokatra avy any ivelany ity dia ahitana solifara, niacin ary pantothenic acid, ka ny fampiasana azy ireo matetika dia manome antoka fa tsara ny maso ary tsy misy olana amin'ny aty sy ny voa.
Ny daty dia misy fiantraikany goavana eo amin'ny gomika, ary tsy hiharatsy ny nifiny, raha tsy efa nanasa ny vavanao ianao rehefa avy nihinana azy ireo. Ny endriky ny daty dia voakasiky ny potassium sy magnesium. Ny fikarakarana azy ireo be dia be, tsy afaka manahy momba ny asan'ny fo, ary koa ny rano tafahoatra ao amin'ny vatana.
Daty - vokatra mora sy mahavariana, ary noho izany dia mety tsara amin'ny fampiasana matetika. Misaotra noho ny tsirony mahafinaritra, manatsara ny fihetseham- po ary mihena ny mety hisian'ny ketraka sy ny adin-tsaina.
Aorian'ny fatiantoka mavesatra, ilaina ny mihinana ny daty maina na vaovao mba hanasitranana haingana ny vatana.
Tombontsoa manokana momba ny daty ho an'ny vehivavy
Zava-misy fantatra fa ny vehivavy dia mila magnesium betsaka ho an'ny fikarakarana ara-dalàna ny taovam-pananahana. Ankoatra izany, ny magnesium dia ilaina amin'ny hozatra, ary midika izany fa tena ilaina tokoa ny atleta hampiasana daty.
Ny reny mampinono dia asaina tsy vitan'ny fanamafisana ny fahasalaman'izy ireo, fa koa ny hanetona ny rononon-jaza miaraka amin'ireo zavatra mahasoa.
Tombontsoa tena mety amin'ny daty amin'ny bevohoka
Sarotra ny mandresy lahatra ny tombontsoa amin'ny daty mandritra ny fitondrana vohoka. Noho ny habetsaky ny varahina ao amin'izy ireo, ny vy dia atahorana kokoa ny vatana. Ao anatin'ny fitondrana vohoka, dia tena zava-dehibe ny mitazona hemoglobinina ara-dalàna ao amin'ny ra ary ny fitsipika isan-kerinandro amin'ny daty isaky ny daty dia mampihatra tsara izany.
Araka ny voalazan'ny mpahay siansa, ny daty dia manatanjaka ny hozatry ny uterus, izay tena manan-danja indrindra amin'ny volana vitsy farany amin'ny maha-bevohoka ary miomana amin'ny fiterahana. Ankoatr'izay, rehefa mampiasa ireo voankazo maina ireo, dia tsy mahatsiravina ny fahakelezan'ny prenatal sy postnatal.
Ny toetra manasitrana ny daty taolana
Avy amin'ny taolan'ny daty no mampiakatra ny ririnina ho an'ny famerenana ny voa sy ny bala, indrindra ho an'ny fanesorana vato. Ny pendriky amin'ny vatony daty dia mahasoa amin'ny fampiasana anaty miaraka amin'ny aretim-pivalanana, ary ivelany amin'ny ratra nahazo azy sy ny fivontainan'ny hoditra. Ny endriny voajanahary dia efa nampiasaina mba hanatsarana ny tanjaky ny lehilahy, ary koa ny tantely sy ny sira ara-daty.
Rehefa ampiasaina amin'ny fomba tsy mety, ny zavamaniry na ny voankazo dia afaka manova ny vokany amin'ny mifanohitra amin'izany. Indraindray aza daty mety hanimba ny vatan'olombelona.
Ny fampitohizana amin'ny fampiasana daty dia aretina ao amin'ny taratasy mivalona amin'ny tsinay. Tsy voatery hisakafo koa ny mararin'ny diabeta , toy ny vokatra mamy izay mampitombo ny siramamy ao amin'ny ra.
Rehefa misafidy daty dia mendrika ny ho mailaka, satria indraindray dia entina amin'ny alalàn'ireo akora simika izy ireo, ary tsy vita ny fizotran'ny dipoavatra. Mifototra amin'ny vahaolana manokana kosa ny daty.
Biby tantely - famokarana medikaly sy fanoherana
Ahoana no hanaisotra poizina amin'ny vatana?
Veronica officinalis - fananana ara-pahasalamana sy fanoherana
Cyanose manga - fampiharana
Inona no manampy ny kibon'i St. John?
Bearberry - fampiharana
Ny fomba ofisialy amin'ny akanjo
Ny asa tanana avy amin'ny gazety
Nihady alika Chihuahua
Fampisehoana mandritra ny Krismasy ho an'ny ho avy
Fifandraisana amin'ny Venus
Thistle - toetra mahagaga
Adenoiditis amin'ny zaza
Nahoana ny zazakely no manafina rehefa avy mampinono?
Glazed ceramic planks
Ny style 60 ao anatiny